9 Qarax oo ka dhacay Johannesburg iyo Masaajid la bur-buriyay
Axmed Dowlo | dawlo@hotmail.com | Oct 31, 2002
Musaliin ku tukanaysa baaqigii ka soo hadhay Masjidul-Ummah (Soweto) oo qarax bur-buriyay habeenkii Khamiista
Habeenimadii ay Khamiista waxay dadka degan deegaanka xaafadaha Soweto, Lenasia iyo Eldodaro Park ee magaalada Johannesburg ku tooseen qaraxyo aad u waaweyn oo aynan maqal 8 sano ee la soo dhaafay. Qaraxyadan oo ahaa 9 iyo laba booliisku ay joojiyeen iyagoon qarxin waxay waxyeelo xoog leh u goysteen xadiidka tareenka ee xaafadahaas, buundooyinka iska kor mara ee loo yaqaano "fly-overs", guryo iyo ruggo ganacsi, iyo waliba mid ka mid ah Masaajida ugu waaweyn xaafada Soweto oo la yidhaahdo Masjidul-Ummah. Masaajidka intiisa badani way burburay.
Qaraxyadan waxaa canbaareeyay dhammaanba axsaabta siyaasada, diimaha iyo ururada bulshada ee wadanka oo dhan. Madaxweynaha wadanka K/Afrika Thabo Mbeki na wuxuu ku tilmaamay inuu falkani yahay mid argagixiso ah oo la doonayo in lagu minja-xaabiyo isu soo dhawaanshaha isa soo taraya ee mujtamaca K/Afrika oo soo maray taariikh is gumaysi iyo isku dul noolaansho oo aad u dheer una fool xun.
Walow nasiib wanaag ayna is lahayn qaraxyada badnidooda iyo waxyeelada bani'aadamka soo gaadhay oo ah hal ruux oo kaliyahi uu ku dhintay iyo laba ku dhaawacantay wali lama oga cida dhab ahaan ka danbaysay. Laakiin waxay dawladu rumaysan tahay in dad cadaan ah oo "cunsuryiin" ahi ay ka danbeeyeen qaraxyadan. Booliisku waxay sheegayaan in labada banbaano ee ay fashiliyeen ay dadkii soo war galiyay u sheegay inay dhigayeen laba nin oo cadaan ah.
Umuurtani waxay walaac weyn ku abuurtay dadka reer K/Afrika oo dhan gaar ahaana dadka Muslimiinta oo sida uu sheegay Sheekh Ibraahiim Bham oo ah madaxa culimada K/Afrika ay dad badan oo muslimiin ahi heleen hanjabaado isla habeenkaas in la qarxin doono "meelaha ay wax ku caabudaan iyo ganacsiydooda".
Dhawrkii asbuuc ee la soo dhaafay waxaa wadanka K/Afrika oo dhan laysla dhex maray in qolyo cadaan ah oo xag jira ayna ka dagi la'dahay dadka madowga ah ee wadanka xukuma ay doonayaan inay af-ganbiyaan dawlada madaxweyne uu madaxa ka yahay Mr. Mbeki. Waxaa la qabtay bishii la soo dhaafay baabuur waday hub culus oo ay lahaayeen kooxdaasi.
Kooxahan cadaanka ah ee la tuhunsan yahay waxay xoogoodu ka tirsanaan jireen ciidankii hore ee dawladii cunsuriyada ee K/Afrika. Waxayna la ollog yihiin kooxaha loo yaqaano Ku Klux Klan (KKK) ee wadanka Maraykanka ee rumaysan in dadka cadaanka ahi aduunka leeyahay dadka kalena ay yihiin adoomo.
Qaraxyadan waxaa dadka reer K/Afrika ugu danbaysay sanadkii 1994 oo taqriiban ay qarxeen 500 oo banbaano oo ay badankooda ka danbeeyeen kooxahan aan kor ku soo sheegnay, ujeedadoodu ahayd in ayna doorashooyin ka dhicin wadanka.
Ciidamada militariga iyo kuwa booliiska ayaa heegan la galiyay wadanka oo dhan, booliiskuna waxay ka codsanayaan dadka inay si dhakhso ah u soo wargaliyaan haddii ay arkaan waxay ka shakiyaan.